Bogga ugu weyn / accessories / Qalabka Musqusha / Warqadda Musqusha ee Musqusha gidaarka ku dhejisey Madow
Naqshadda ugu yar ee qasabadaha iyo qalabyada WOWOW waxay dhammaystiraan qurxinta dhaqanka iyo kuwa casriga ah.
Waraaqaha musqusha adag ee lagu dhammeeyo oo aad u fiican.
Si fudud loo rakibo loona hayo si aad u wanaagsan. Duubka warqadda musqusha ma duuli doono sidoo kale markaad isticmaaleyso.
Waraaqaha musqusha madow haysta, jillaab go'an
Ku habboon kubbadaha xajmiga leh ballaca haray ee 110mm
Barroosinka Transparent + ∅4 * 35mm fur is-taabashada + furaha hex
-Style: Musqusha Xaashida Musqusha
Maaddada Jirka: 304 ahama
-Fintish: Naxaas Saliid La Mashiiday
Habka rakibaadda: Darbiga oo lagu dhejiyay Boolal
-1 Hol Musqusha Xaashida Musqusha
-1 ories Qalabka Lagu Kordhinayo
-1 Guide Tilmaamaha Isticmaalaha
Waxaa lagu dhisay bir bir ah oo aan qaali ahayn oo 304 ka dhigaysa mid ka dhigaysa mid daxaya oo culus.
Dhamaystirka jilicsan ee MATTE MADOW muujiyo wax dhibco ah oo iska caabiya xoqida maalinlaha ah, dayactirka maalinlaha ah waa mid fudud, wuxuu si fudud u ilaaliyaa muuqaalkiisa siman ee aan iin lahayn
Qaab wareegsan oo qaas ah ayaa ku dar waxyaabo aad u casri ah qurxinta qolkaaga, geesaha qaawan waxay jirkaaga ka ilaalinayaan xoqida.
Ku dar giraan shukumaan & waraaqaha musqusha haysta.
Qalabka furfuran ee qarsoon, fududahay in la rakibo, iyo qalabka dhejinta ayaa lagu daray.
SKU: 480103DB Categories: Qalabka Musqusha, accessories Tags: qalabka musqusha, casriga ah, 304keeda
14.5 14.5 8.5 cm